ထုတ်ကုန်များ - Slurry Pump, Excellent ကရေ Pump, Warman ညှစ်ထုတ်လိုက်
ဒီနေ့ JP ကုမ္ပဏီ 2006 ခုနှစ်တွင်ထူထောင်ကတည်းကပြီးသား 11 နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီ 11 နှစ်တာကာလအတွင်းကျနော်တို့အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များကိုပင် shijiazhuang မြို့ထဲတွင်အကြီးမားဆုံး foundry စက်ရုံရှိစကားလုံး၏အတူတူ slurry စုပ်စက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အပိုပစ္စည်းများကိုစကားလုံး၏ကမ္ဘာကြီးကိုထံမှကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီနှင့် client များအတွက်ညှစ်ထုတ်လိုက် စကားလုံး၏လက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ပင်အကြွေးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်ပြီးနောက်ဆုံးနဲ့အတွေ့အကြုံရှိ foundry အင်ဂျင်နီယာများ, ငါတို့ 1-3 ရက်အတွင်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအများစုအပြည့်အဝထားနှင့်စကားလုံး၏ပေးပို့သည့် pump နိုင်သည့်ဘုံဘိုင်၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုအလုံအလောက်သိုလှောင်မှုများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းဖောက်သည် .Yes ရန်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အများဆုံးရိုးရိုးသားသားနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးမိတ်ဖက်များမှာ!
We have nowaskilled, performance group to offer excellent support for our consumer. We usually follow the tenet of customer-oriented, details-focused for Products, , , , We persistently develop our enterprise spirit "quality lives the business, credit score assures cooperation and retain the motto inside our minds: consumers very first.
Slurry စုပ်စက်အောက်ခံ (ထောက်ခံမှု)
A05 မြင့်မားတဲ့ chrome ကှနျ့နှင့်လှုံ့ဆျော
stuffing သေတ္တာနှင့်ရိုးတံအင်္ကျီလက်နှင့် FPL ထည့်သွင်း
A05 အမြင့် Chrome ကိုထုတ်ပယ် Ring ကို